The ugu wax soo saar, hufan, raaxo, iyo sida ku haboon inuu u duulo waa duulaysa gaarka ah. Waxa ay keentey in 20% wax soo saarka dheeraad ah. Dhinaca kale, duulaya raadad ganacsi si 40% da'a in wax soo saarka.
Iyada oo charter jet gaar ah fulinta uu idiin badbaadiyo waqtiga, maxaa yeelay,, aad jet haysan in aan ka garoomada waaweyn in ay leeyihiin xafiisyada lahayn qaado. jet A gaarka loo leeyahay ka garoonka diyaaradaha yar tegi karo. Waxaa jira dad badan oo yar yar oo badan garoomada waa weyn.
Kaliya mid ka mid ah shan dalalkii Diyaaradaha gaarka loo leeyahay iyo ka garoomada waaweyn tagto. Maddaarada la gaadiidka yar xamili ka badan 50% of Diyaaradaha gaarka ah. 30% ee Diyaaradaha ka madaarada sare tegin.
Duuli marka aad rabto
Iyadoo airline ganacsi, inaad la qabsato jadwalka si ay u daboolaan baahida airline ah. Iyada oo charter jet gaar ah fulinta, waa habka wareega kale.
heersare ah la ekaan
The gudaha ee jet gaar ah waa mid cajiib ah. Iyagu waa ka duwan wax kasta oo aad ku aragteen. Diyaaradaha ayaa qaarkood gudaha qurxiyey dahab iyo lacag. Waxaad ka heli kartaa Diyaaradaha la qasabada biyaha gacanka dahaadhay 24 dahab carats. accessories kale qabow ee Diyaaradaha, kuwaas oo ka mid ah dahab maddiibadihii saxanka, badhamada fadhiisan kursiga iyo sare raaxo hardware suunka badbaadada.
Cream The of Society dukhsiga Private
Tan waxaa ka mid Bill Gates, John Travolta, Oprah Winfrey, Jackie Chan, iyo Tom Cruise. John Travolta leeyahay kow iyo toban Diyaaradaha gaarka ah oo ay ku jiraan Boeing a 707. Jay-Z leeyahay Bombardier tartame a 850 iyo, Tom Cruise leeyahay Gulfstream IV a. madaxda shirkadaha Top ka Google, Microsoft, Coca-Cola, oo kale Fortune 500 shirkadaha gaarka loo leeyahay duuli. Shirkadaha yar yar iyo bartamihii yimaa-ka samaysan boqolkiiba wanaagsan ee isticmaalka diyaaradaha khaaska ah. ganacsi heer-sare iyo dadka caanka ah Hollywood isticmaalayso Diyaaradaha gaarka ah. Technical, iibka, iyo xirfadlayaasha sidoo kale u isticmaali hab this of gaadiidka.
Ma aha in aad si aad leedahay jet gaar ah si ay u raaxaystaan ​​heersare ah iyo sharafta of duulaya gaarka ah. Waxaad ballansan kartaa charter jet gaar ah fulinta masaafo ee noloshaada.